စိုက်ပျိုးရေးသမဝါယမအသင်းများသို့ ဆောင်းသီးနှံစိုက်ပျိုးစရိတ် ပံ့ပိုးချေးငွေများ ပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပ
တောင်ကြီး နိုဝင်ဘာ ၀၇
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ရပ်စောက်မြို့နယ်ရှိ စိုက်ပျိုးရေးသမဝါယမအသင်းများသို့ ဆောင်းသီးနှံ စိုက်ပျိုးစရိတ် ပံ့ပိုးချေးငွေများပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားကို နိုဝင်ဘာ(၇)ရက်နေ့ နံနက်(၁၀)နာရီ အချိန်တွင် ရပ်စောက်မြို့နယ်၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရုံး၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားသို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ စီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးဝန်ကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ် သမဝါယမလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဌ ဦးအောင်ကျော်ညွန့်၊ ရှမ်းပြည်နယ်သမဝါယမဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်ယုယုအေး၊ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း/အရှေ့ပိုင်းသမဝါယမအသင်းစုချုပ် ဥက္ကဌ ဦးကျော်မြခိုင်၊ ရပ်စောက်မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးသက်နိုင်ဦး၊ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ မြို့နယ်သမဝါယမအသင်းစုနှင့် အခြေခံသမဝါယမအသင်းများမှ အမှုဆောင်များ၊ အသင်းသား/အသင်းသူ တောင်သူလယ်သမားများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
အခမ်းအနားတွင် ရှမ်းပြည်နယ်သမဝါယမလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဌ၊ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဝန်ကြီးမှ အသင်းသူ/အသင်းသားများအနေဖြင့် ရရှိသည့် ပံ့ပိုးချေးငွေများအား မိမိတို့ လုပ်ငန်းတွင် အမှန်တကယ်အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုရေး၊ သတ်မှတ်ချိန်အတိုင်း ပြန်လည်ပေးဆပ်နိုင်ရန်အတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရေး၊ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် သမဝါယမစိတ်ဓါတ်ပြည့်ဝစွာဖြင့် အတွေးအခေါ် (Mind Set)များ ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ရန် မှာကြားခဲ့ပါသည်။
၎င်းနောက် စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေများအား အသင်းသားကိုယ်စားလှယ်များထံသို့ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဝန်ကြီး ဦးအောင်ကျော်ညွန့်၊ ရှမ်းပြည်နယ်သမဝါယမဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်ယုယုအေး၊ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း/အရှေ့ပိုင်း သမဝါယမအသင်းစုချုပ် ဥက္ကဌ ဦးကျော်မြခိုင် တို့မှ ပေးအပ်ခဲ့ကြပါသည်။ ရပ်စောက်မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု(၄)အုပ်စုရှိ ကျေးရွာ(၁၈)ရွာမှ စိုက်ပျိုးရေး သမဝါယမအသင်း (၁၈)သင်းသို့ စုစုပေါင်း ပံ့ပိုးချေးငွေ (၁၂၀၃.၇၅)ထုတ်ချေးပေးခဲ့ပြီး ရပ်စောက် မြို့နယ်ရှိ အခြေခံသမဝါယမအသင်းများသို့ ပံ့ပိုးခြေးငွေ ကျပ် သိန်းပေါင်း (၂၀၀၀)ကျော် ထုတ်ချေးပေး ထားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ခမ်းရွှေဝါထွန်းကုမ္ပဏီမှ Solar System - LED မီးလင်းရေးစနစ်သုံးပစ္စည်း (၂၀)စုံ လှူဒါန်း
တောင်ကြီး နိုဝင်ဘာ ၀၆
ခမ်းရွှေဝါထွန်းကုမ္ပဏီမှ Solar System - LED မီးလင်းရေးစနစ်သုံးပစ္စည်း (၂၀)စုံ လှူဒါန်းခြင်းကို နိုဝင်ဘာ(၆)ရက်၊ မွန်းလွဲ(၁)နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ ပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံး၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ခမ်းရွှေဝါထွန်းကုမ္ပဏီမှ Solar System - LED မီးလင်းရေးစနစ်သုံးပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေါ်နန်းကြာယုံ (ခ) ဒေါ်နန်းရွှေမြတ်က ရှင်းလင်းရာ မီးလင်းတိုင်(၁)တိုင်၏အကျိုးမှာ ထိခိုက်ခြင်းမရှိပါက (၁၀)နှစ် သက်တမ်းရှိပြီး (၁)နှစ် အာမခံကြောင်း၊ ဆိုလာမီးများ ညပိုင်းရောက်လျှင် အလိုလိုမီးလင်း၍ နေ့ပိုင်းတွင် အလိုလိုမီးပိတ်သွားကြောင်း၊ မီးသီး(၁)လုံး ဆိုလာသည် မီးသီး(၁)လုံး ဖယောင်းတိုင် (၅၀)နဲ့ ညီမျှပါကြောင်း၊ မီးသီး(၃)လုံး တစ်ပြိုင်တည်းသုံးပါက (၄)နာရီခံနိုင်ကြောင်း၊ ယခု ဆိုလာမီးသည် မီးဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းပြီး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းပေးပါကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားသွားသည်။
ဆက်လက်၍ Solar System - LED မီးလင်းရေးစနစ်သုံးပစ္စည်း (၂၀)စုံအား ခမ်းရွှေဝါထွန်းကုမ္ပဏီမှ ဒေါ်နန်းကြာယုံ (ခ) ဒေါ်နန်းရွှေမြတ်က ပေးအပ်လှူဒါန်းရာ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းဆာလူမှ လက်ခံရယူပြီး ကျေးဇူးတင်စကား ပြန်လည်ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဝန်ကြီး၊ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးဝန်ကြီး၊ ပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး၊ ပြည်နယ်လျှပ်စစ်နှင့် စက်မှုလက်မှုဝန်ကြီး၊ အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး၊ ပြည်နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၊ ကုမ္ပဏီမှ အလှူရှင်များ တက်ရောက်ကြကြောင်း သိရှိရသည်။
ရှမ်းပြည်နယ် မြေစာရင်းဦးစီးဌာန အတွင်းရှိ ပြည်နယ်/ခရိုင် နှင့်ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) အတွင်းမှ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်ခွဲ မြေစာရင်းဦးစီးဌာနမှူးများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲကျင်းပ
တောင်ကြီးမြို့ နိုဝင်ဘာ ၂
ရှမ်းပြည်နယ်မြေစာရင်းဦးစီးဌာန အတွင်းရှိ ပြည်နယ်/ခရိုင်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) အတွင်းမှ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်ခွဲ မြေစာရင်းဦးစီးဌာနမှူးများတွေ့ဆုံပွဲကို နိုဝင်ဘာ(၂)ရက် နံနက်(၁၀)နာရီ (၁၅)မိနစ်က ပြည်နယ်မြေစာရင်းဦးစီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးစဝ်အောင်မြတ်က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြောကြားခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်မြေစာရင်းဦးစီးဌာနမှူး ဦးအောင်ကြည်ဦးမှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု များရှင်းလင်းတင်ပြပြီးနောက် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးစဝ်အောင်မြတ်မှ နိဂုံးချုပ်အမှာ စကားပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးစဝ်အောင်မြတ်၊ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းဆာလူ၊ အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး၊ ပြည်နယ်/ခရိုင် နှင့် ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း) အတွင်းရှိ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်ခွဲ ဦးစီးမှူးများ တက်ရောက်ကြကြောင်း သိရှိရသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးပညာရေးကောလိပ် နဝမအကြိမ် ဆရာအတတ်ပညာကျွမ်းကျင်မှု ဒီပလိုမာအပ်နှင်းပွဲ ကျင်းပ
ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးပညာရေးကောလိပ် နဝမအကြိမ် ဆရာအတတ်ပညာကျွမ်းကျင်မှု ဒီပလိုမာအပ်နှင်းပွဲကို နိုဝင်ဘာလ(၆)ရက်၊ နံနက်(၈)နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ ပညာရေးကောလိပ်ခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးစဝ်အောင်မြတ်၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်၊ အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး၊ ပြည်နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ပညာရေးကောလိပ်မှ ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးနှင့် ဆရာမများ၊ ဒီပလိုမာအပ်နှင်းမည့် ဆရာမများနှင့် မိဘပြည်သူများ တက်ရောက်ကြသည်။
အခမ်းအနားတွင် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်က လမ်းညွှန်အမှာစကား ပြောကြားပြီး၊ နဝမအကြိမ် ဆရာအတတ်ပညာကျွမ်းကျင်မှု ဒီပလိုမာအပ်နှင်းပွဲ ပထမပိုင်း အခမ်းအနားကို ခေတ္တရပ်နားလိုက်သည်။
ရှမ်းပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ မြို့နယ်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီများ လုပ်ငန်းညှိနိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ
တောင်ကြီး နိုဝင်ဘာ ဝ၂
ရှမ်းပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း) မြို့နယ်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီများ လုပ်ငန်းညှ်နိုင်းစည်းအဝေးကို နိုဝင်ဘာ(၂)ရက် နံနက်(၉)နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ မြို့တော်ခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးစဝ်အောင်မြတ်၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒုတိယ ဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်၊ ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်၊ အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး၊ ပြည်နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများ၊ ရှမ်းပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ ပြည်နယ်ဌာနခွဲတာဝန်ခံများနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) မြို့နယ်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ၊ အတွင်းရေးမှူးများနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ တာဝန်ခံအင်ဂျင်နီများ တက်ရောက်ကြသည်။
အခမ်းအနားတွင် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးစဝ်အောင်မြတ်မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလှဝင်းမှ ရှမ်းပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေပါ ရှမ်းပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနှင့် မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်မည့်အခြေအနေ၊ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များနှင့် မူဝါဒများ အား စနစ်တကျလိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကိစ္စများ ရှင်းလင်းတင်ပြဆွေးနွေးသည်။
ဆက်လက်၍ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ် ဦးမောင်မောင်မှ ရှမ်းပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေ အား အကျဉ်းချုပ်တင်ပြဆွေးနွေးပြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး၊ ရှမ်းပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးစိုင်းထွန်းထွန်းမှ ရှမ်းပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီများ၏ စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာများ ရှင်းလင်းတင်ပြကြသည်။
ထို့နောက် ရှမ်းပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေး ဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလှဝင်းမှ ရှမ်းပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေစာအုပ်များအား ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ ပြည်နယ်/ခရိုင်/မြို့နယ် တရားရုံးများအတွက် ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ် ဦးကြွယ်ကြွယ်အား အုပ်ရေ(၇၀)ကိုလည်းကောင်း၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်အတွက် လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဌ ဦးစိုင်းခမ်းမှတ်အား အုပ်ရေ(၁၅၀)ကိုလည်းကောင်း၊ ပြည်နယ်/ခရိုင်/မြို့နယ် ဥပဒေရုံးများအတွက် ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ် ဦးမောင်မောင်အား အုပ်ရေ(၇၀)ကိုလည်းကောင်း ပေးအပ်ခဲ့သည်။
၎င်းနောက် ရှမ်းပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး၊ ရှမ်းပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးစိုင်းထွန်းထွန်းမှ စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစာအုပ်များအား ပေးအပ်ရာ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီများ ကိုယ်စား တောင်ကြီးမြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ ဦးစွန်ကြိုင်မှ လက်ခံရယူကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ပထမအကြိမ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၃) ဒုတိယနေ့ ကျင်းပ
တောင်ကြီး နိုဝင်ဘာ ၀၅
ပထမအကြိမ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၃) ဒုတိယနေ့ကို နိုဝင်ဘာလ(၅)ရက်၊ နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီအချိန်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၁၄၀)ဦး ရှိသည့်အနက် ခွင့်ပန်ကြားသူ (၁၅)ဦး ရှိပြီး အစည်းအဝေးသို့ (၁၂၅)ဦး တက်ရောက်သည်။
ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၁)ဦးက ကြယ်ပွင့်ပြထားသည့် မေးခွန်း (၁)ခု မေးမြန်းခြင်းနှင့် ပြည်နယ်အဆင့်အဖွဲ့အစည်းဝင်က ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး ရှမ်းပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေတွင် ပါဝင်သော ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးရန် တင်ပြထားသော ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်က ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးမှ ပြန်လည်ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးပြီး လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူခဲ့ပါသည်။
ပထမအကြိမ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၃) ကို နံနက်(၁၀:၃၀)အချိန်၌ ရပ်နားခဲ့ပါကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ပန္နရသမအကြိမ်မြောက် ကမ္ဗောဇသာမဏေကျော် စာမေးပွဲ စာအောင်ဘွဲ့နှင်းသဘင်
တောင်ကြီး နိုဝင်ဘာ ၀၁
ပန္နရသမအကြိမ်မြောက် ကမ္ဗောဇသာမဏေကျော် စာမေးပွဲ စာအောင်ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနားကို နိုဝင်ဘာ(၁)ရက် မွန်းလွဲ(၁)နာရီက ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ အတုလမာလရဇိန်ဆုတောင်းပြည့် မြတ်စွာဘုရား၊ မြို့လယ်ဓမ္မာရုံ၌ ကျင်းပရာ ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးစဝ်အောင်မြတ် အမှူးပြုသော ဧည့်ပရိသတ်တို့က နမောတဿ(၃)ကြိမ် ဘုရားကန်တော့ပြီး အခမ်းအနားကို ဖွင့်လှစ်၍ နိုင်ငံတော်သြဝါဒ စရိယအဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတမဟာကမ္မဌာနစရိယ စွန်းလွန်းကျောင်းတိုက်ဦးစီးပဓါန မဟာနယက ဘန္ဒန္တ အဂ္ဂဓမ္မာဘိဝံသ အရှင်သူမြတ်ထံမှ ငါးပါးသီလခံယူတော်မူ ဆောက်တည်ကြသည်။
ဆက်လက်၍ မြို့လယ်ဓမ္မာရုံ ဂေါပကအဖွဲ့ ဥက္ကဌ ဦးစွန်ကြိုင်က ပန္နရသမအကြိမ်မြောက် ကမ္ဗောဇသာမဏေကျော် စာမေးပွဲကျင်းပအောင်မြင်မှု အခြေအနေများကို တင်ပြလျှောက်ထားသည်။
ထို့နောက် ကမ္ဗောဇသာမဏေကျော် ''သာမဏေကျော်""များကို ဘွဲ့ပုံတော်နှင့် ဘွဲ့တံဆိပ်တော်၊ ဘွဲ့အလံတော်များကို ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်၊ ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်၊ အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး၊ ပြည်နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတို့က ဆက်ကပ်ပြီး၊ စာမေးပွဲအဆင့် အလိုက် အောင်လက်မှတ် စာအောင်ဆုများကိုလည်း ဂေါပကအဖွဲ့နှင့် တာဝန်ရှိသူတို့က ဆက်ကပ်ကြသည်။
၎င်းနောက် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးစဝ်အောင်မြတ်က ဆရာတော်ကြီးများအား လှူဖွယ်ပစ္စည်းများ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပြီး နိုင်ငံတော်သြဝါဒ စရိယအဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတမဟာကမ္မဌာနစရိယ စွန်းလွန်းကျောင်းတိုက်ဦးစီးပဓါန မဟာနယက ဘန္ဒန္တ အဂ္ဂဓမ္မာဘိဝံသ အရှင်သူမြတ်ထံ လှူဒါန်းမှုအစုစုတို့အတွက် ရေစက်သွင်းချအမျှပေးဝေကြသည်။
ယင်းနောက် အခမ်းအနားကို ဗုဒ္ဓသာသနံစိရတိဌတု ဂါထာတော်(၃)ကြိမ်ရွက်ဆိုဆုတောင်း၍ ရုပ်သိမ်းပြီး၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ ဧည့်ပရိသတ်တို့က ဆရာတော်သံဃာတော်များကို လှူဖွယ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများ လောင်းလှူကြသည်။
ပန္နရသမအကြိမ်မြောက် ကမ္ဗောဇသာမဏေကျော် စာမေးပွဲတွင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ စာဖြေ သံဃာတော်ပေါင်း(၆၇၄)ပါး၊ စာဖြေအောင်မြင် သံဃာပေါင်း(၂၃၇)ပါးဖြစ်ပြီး၊ အခမ်းအနားကို ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်၊ ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်၊ အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး၊ ပြည်နယ်/ခရိုင်/မြို့နယ် အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များ၊ ဝတ်အသင်းအဖွဲ့များ၊ အလှူရှင်များ၊ ဖိတ်ကြားထားသည့် ဧည့်သည်တော်များ တက်ရောက်ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ပထမအကြိမ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၃) ပထမနေ့ ကျင်းပ
တောင်ကြီး နိုဝင်ဘာ ၀၄
ပထမအကြိမ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၃) ပထမနေ့ကို နိုဝင်ဘာ(၄)ရက်၊ နံနက်(၁၀)နာရီအချိန်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၁၄၀)ဦးရှိသည့်အနက် ခွင့်ပန်ကြားသူ (၁၆)ဦး ရှိပြီး အစည်းအဝေးသို့ (၁၂၄)ဦး တက်ရောက်ကြပါသည်။
ပထမဦးစွာ ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဌက ကတိသစ္စာမပြုရသေးသော တပ်မတော်သား ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၁)ဦးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းခံရသော ဦးစိုင်းလှဝင်း၊ မိုင်းပြင်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်(၂)တို့အား ကတိသစ္စာပြုခြင်း၊ ကတိသစ္စာပြုလွှာပေါ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးစဝ်အောင်မြတ် က လွှတ်တော်သို့ မိန့်ခွန်း ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၅)ဦးက ကြယ်ပွင့်ပြထားသည့် မေးခွန်း(၇)ခု မေးမြန်းခြင်းနှင့် ပြည်နယ်အဆင့်အဖွဲ့အစည်းဝင်များက ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းများ ပြုလုပ်ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေတွင် ပါဝင်သော ဌာန/အဖွဲ့အစည်းများ၏ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းအား ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်၊ ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးခွန်သိန်းမောင်က လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းခဲ့သည်။
ထို့နောက် ပထမအကြိမ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၃) ပထမနေ့ အစီအစဉ်ကို နေ့လည်(၁၂:၃၀)နာရီတွင် ရပ်နားလိုက်ကြောင်း သတင်းရှိရသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် CTI Engineering Co.,Ltd.(Janpan)မှ အထူးကိုယ်စားလှယ်များတို့ တွေ့ဆုံ
တောင်ကြီး အောက်တိုဘာ ၃၁
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးစဝ်အောင်မြတ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး၊ ပြည်နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများတို့သည် CTI Engineering Co.,Ltd.(Janpan)မှ အထူးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များအား အောက်တိုဘာ(၃၁)ရက်၊ မွန်းလွဲ(၄)နာရီက ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ရုံးခန်း၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် CTI Engineering Co.,Ltd.(Janpan) မှ အထူးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့က အင်းလေးကန်ရေရှည်တည်တံ့ရေး၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ခေတ်မှီနည်းစနစ် စိုက်ပျိုးရေး စီမံကိန်းကိစ္စရပ်များ အမြန်ဆုံး အကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရသည်။
အထက်သံလွင်(မိုင်းတုံ) ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ ရှင်းလင်းခြင်း
ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးမြို့၌ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးစဝ်အောင်မြတ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်၊ အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး၊ ပြည်နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများနှင့် အောက်တိုဘာ(၃၁)ရက်၊ မွန်းလွဲ(၁)နာရီခွဲက ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ အထက်သံလွင်(မိုင်းတုံ) ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ ရှင်းလင်းခြင်း ကျင်းပသည်။
ပထမဦးစွာ International Group of Enterepreneurs Co.,Ltd. ၊ Group Deputy Managing Director ဦးသန်းဝင်းဆွေမှ တွေ့ဆုံရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်များ ရှင်းလင်းတင်ပြ၍ မိတ်ဆက်စကား ပြောကြားသည်။ ဆက်လက်၍ Mr.Lu Guojun (Assistant President of CTGC) မှ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာများအား ရှင်းလင်းဆွေးနွေး၍ လည်းကောင်း၊ မိုင်းတုံရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း Feasibility Study Report ဆောင်ရွက်ထားခဲ့မှု အခြေအနေများနှင့် စီမံကိန်းဆိုင်ရာ ရွေးချယ်သတ်မှတ်မှုများအား ရှင်းလင်း တင်ပြကြသည်။
ထို့နောက် တက်ရောက်လာသူများမှ မေးခွန်း မေးမြန်းခြင်းနှင့် ပြန်လည် ရှင်းလင်းပြီး၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးစဝ်အောင်မြတ်က နိဂုံးချုပ် အမှာစကား ပြောကြားကြောင်း သိရှိရသည်။
တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်ကျင်းပရေး တတိယအကြိမ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ
တောင်ကြီးတက္ကသိုလ် (၃)ထပ်ဆောင်များ ပန္နိက်တင် မင်္ဂလာကျင်းပ
ပထမအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၃) ခေါ်ယူ ကျင်းပမည်
ရှမ်းပြည်နယ် လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း၏ (၂၆-၁ဝ-၂ဝ၁၃)ရက်နေ့ ဆီဆိုင်မြို့နယ် ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ရန် သွားရောက်ခဲ့သည့် ခရီးစဉ်
ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ် (စစ်ကိုင်း) တက်ရောက်မည့် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ထံ သြဝါဒခံယူ